Anyi na-enwe enwe enwe | Franmụaka Franchises | Franchiseek
»Ohere ndi Franchise»Ursbọchị Nurseries Monkey Puzzle
Ursbọchị Nurseries Monkey Puzzle
Ntọala na 2002, Monkey Puzzle Day Nurseries bụ ụlọ mgbasa ozi UK na-elekọta ụmụaka na atọ nke atọ kacha ukwuu. Site na otu di na nwunye, Mark na Rebecca Crosby mebere ma rụọ ọrụ, akara ahụ nwere ike ị nweta ihe nketa ya na nlekọta ụmụaka na 1976, mgbe ọgbọ mbụ mepere na Cambridgeshire site na ọgbọ mbụ nke ezinụlọ Crosby (na-azụ ahịa dịka Ladybird Day Nursery). N'afọ 2005, Monkey Puzzle butere ụlọ akwụkwọ ọta akara mbụ na mba mbụ, nke togosila ihe karịrị ụlọ 60 na-aga nke ọma na mba ahụ, na -eme ka Monkey Puzzle bụrụkwa ụlọ ọrụ mgbasa ozi ụlọ ọrụ UK na-ebuwanye ibu na UK. Monkey Puzzle Day Nurseries bu onye isi ahia nke anabataghi ya na ulo oru ndi nlebara anya nke UK. Afọ na afọ Monkey Puzzle franchise enweela ọmarịcha ọganihu ma ugbu a na-enye ike jikọtara ọnụ nke ụfọdụ ebe ụmụaka 4,000 na-elekọta. Uto na-aga n'ihu n'ọ̀tụ̀tụ̀ dị egwu, na-emepekwa ọtụtụ ntọala n'ofe UK n'afọ a.
Isi okwu Franchise
Enweghị ahụmịhe ụmụaka na achọrọ ka etinye ego na ntanetị Monkey Puzzle Day Nurseries. Franchisees a na-achọ inweta ga-enwerịrị agụụ isoro ụmụaka na-arụ ọrụ ma nwee ezi mkparịta ụka. Ahụmịhe nke ijikwa ndị ọrụ bara uru. Ọ na-ewe ihe dị ka otu afọ iji mepee aha mgbasa ozi Monkey Puzzle Day Nurseries site na nyocha mbụ. Ozugbo ha guzobere ụlọ akwụkwọ ọta akara ha mbụ, franchisees nwere ike mepee ebe nchekwa ọzọ, dabere na franchisor.
Dika nke a bu oru nlekota oru, ihe ndi ozo bu franchisee bu duru ndi otu ndi umu ha n’ulo na –eme ka ndi ahia ha noo.
Enweghị ahụmịhe ụmụaka na achọrọ ka etinye ego na ntanetị Monkey Puzzle Day Nurseries
Yana ezigbo ọzụzụ na nkwado na-aga n'ihu na nkwado na ịnweta usoro ụlọ ọrụ a nwalere ma mara otu esi, ndị franchisor na-enyere ndị aka ahịa aka ịchọta na idozi ụlọ dị mma ebe ha ga-ehibe azụmahịa ha.
Franchisees a na-achọ inweta ga-enwerịrị agụụ isoro ụmụaka na-arụ ọrụ ma nwee ezi mkparịta ụka.
Ahụmịhe nke ijikwa ndị ọrụ bara uru
Ọ na-ewe ihe dị ka otu afọ iji mepee aha mgbasa ozi Monkey Puzzle Day Nurseries site na nyocha mbụ.
Ozugbo ha guzobere ụlọ akwụkwọ ọta akara ha mbụ, franchisees nwere ike mepee ebe nchekwa ọzọ, dabere na franchisor.
Nhọrọ netwọkụ: Nọmba iri isii na isii
Frandị Franchise: Nlekọta
Ego mbido mbido: £ 300,000- £ 500,000
Ndenye ego onwe onye kacha nta: £ 90,000
Ọnọdụ Franchise: Mba
Ahịa: Nlekọta ụmụaka
Nzọụkwụ ndị ọzọ
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ohere ọfụma ọhụụ a enwere na Monkey Puzzle Day Nurseries, biko pịa n'okpuru wee mee ajụjụ.